प्रेमीले दिएको उपहार नेकलेस दुई बर्ष प्रेमिकाले लगाइन्, जब नेकलेस टुट्यो, खुशीले चिच्याइन् , आखिर के थियो त्यो नेकलेस भित्र त्यस्तो? - Mountain Media
प्रेमीले दिएको उपहार नेकलेस दुई बर्ष प्रेमिकाले लगाइन्, जब नेकलेस टुट्यो, खुशीले चिच्याइन् , आखिर के थियो त्यो नेकलेस भित्र त्यस्तो?
Mountain Media July 21, 2021 1 min read
पुरुषहरू उपहार खरिद गर्न जान्दैनन् भनिन्छ । जहाँसम्म, कहिलेकाँही पुरुषहरूले तपाईंलाई चकित पार्न सक्दछन् र सही उपहार फेला पार्ने आशामा धेरै कुुराहरु गर्न जान्छन् । कतिले आफ्नो रचनात्मकता र कल्पनालाई उनकी पत्नी वा प्रेमिकाको लागि सबैभन्दा रोमान्टिक उपहार बनाउन सक्दछन् ।
यो कथा टेरी र अन्नाको हो, कसैलाई पनि यो प्रेमिकाले पाएको आश्चर्यको अनुमान गर्नुपर्दैन जब टेरीले आफूले किनेको केही चीजको यस्तो सुन्दर संयोजन गरे । यद्यपि, त्यो अझै पर्याप्त थिएन, जसले त्यसलाई एक सहज योजना बनाए जसले उनको प्रेमिका अन्ना सधैंका लागि उनकी भइन् ।
टेरी र अन्ना अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका राम्रा जोडी हुन् । उनीहरू पहिलो पटक लगभग चार बर्ष मित्र भएको पछि डेटिङ गर्न थाल्छन् र एक बर्ष भन्दा बढि सँगै छन् । तिनीहरू सँगै धेरै खुसी छन् र सँगै अर्को कदम चाल्न तयार छन् ।
टेरीले अन्ना को लागी एक हार बनाएर उपहार दिने एक सोच गरेका थिए । उनले धेरै समयसम्म र प्रयास गरे, तर अन्तत उनसले यो सहि निर्णय गरे र गलामा सधैं झल्किने उपहार उनलाई दिए । त्यसपछि उनले एउटा चेन खरीद गरे र एउटा नेकलेस बनाए । टेरीले हारको मुख्य टुक्रा तास्मानियाको काठबाट बनायो जुन उच्च गुणको सजावटी काठ हो जुन फर्नीचर र क्याबिनेट, साथै अन्य साना वस्तुहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यो गलाको लागि उत्तम सामग्री हो जुन हरेक मानिसहरुको रोजाइमा पर्न गइरहेको छ ।
टेरीले अन्नालाई उनीहरूको वार्षिकोत्सवको लागि रमाईलो भोजमा घर बाहिर निकाल्ने निर्णय गरे । यसै ठाउँमा उनले आफ्नो ठूलो आश्चर्य प्रकट गर्ने योजना गरेका थिए । टेरी थोरै डराएका थिए किनभने अन्ना प्राय उनी आफूले लगाएको गहनाका बारेमा अत्यन्तै चुजी थिई, तर त्यसले उसलाई रोक्न सकेन । एक पटक ती जोडीले आफ्नो खानेकुरा खाएपछि टेरीले निर्णय गरे कि अब उनको आश्चर्यचकित गर्ने समय आयो । यो तब हो जब उसले आफ्नो हस्तनिर्मित हार बाहिर निकाले र अन्नालाई प्रस्तुत गरे । अन्नाको प्रतिक्रिया जेरीले सोचेको थिएन, र जब उसले अन्तमा उसलाई दिए उनी डराइरहेका थिए ।
यस्तो देखिन्थ्यो कि टेरी डराई हाल्नु जरूरी थिएन किनकि टेरीको रोजाई अन्नालाई मन पर्यो । उनले यसलाई प्यार गरिन् । उनलाई यो हार सबैभन्दा धेरै मन पर्ने कारण टेरीले बनाएको हो । उनको प्रतिक्रियाले टेरीलाई ठूलो राहत पाए । टेरीले अन्नालाई दिएको उपहार आफैंले बनाएको तथ्यले अझ विशेष बनायो । उनले यो पाए पछि यसलाई राखिन् र फेरि यो कहिल्यै निकालिनन् । यति लामो समय सम्म लगाए पछि पनि, त्यस लेकलेस भित्र लुकाईएको कुराको बारे अन्नालाई कुनै संकेत थिएन ।
टेरीको योजना, नेकलेस डिजाइन गर्दा, उनको लागि अविश्वसनीय मूल्यवान् चीज लुकाउनु थियो । यो निश्चित गर्नको लागि उत्तम तरिका हो कि कसैलाई पनि बहुमूल्य चीज फेला नपरोस् । उसको योजना एक दिन ट्र्याकमा थियो जब सत्य बाहिर आयो र उसको र अन्नाको नाता थप पवित्र बनायो । अन्नालाई हार दिइसकेपछि टेरीलाई डर थियो कि अन्तमा उसले आफ्नो गोप्य रहस्य बाहिर आउन सक्नेछ । उनलाई थाहा थियो कि यदि अन्नाले उनको रहस्यको बारेमा थाहा पाइन् भने ऊ ठूलो समस्यामा पर्ने थियो, खुशीको कुरा अन्नालाई हार तयार गर्नु अघि थाहा यो रहस्य थाहा थिएन ।
यो स्पष्ट थियो कि अन्नाले हार धेरै मन पराउँछिन्, किनकि उनी आफ्ना सबै साथीहरुलाई देखाउँछिन् । यद्यपि, आत्मबिश्वासी हुनुको सट्टा, टेरी झनै डरले भरिए र किन कि उनले भित्र लुकाइएको कुराको बारेमा अन्नाले एक दिन अवस्य पत्ता लगाउनेछन् । टेरीले अन्नालाई स्कटल्याण्ड लैजाने बिचार गरे । यो यात्रा उसको रहस्य खुलासा गर्ने उत्तम ठाउँ हुने निर्णय गरे । उनले त्यस अभिव्यक्तिलाई यति धेरै समयदेखि धकेल्दै थिए कि सत्य बाहिर आउन २ बर्ष समय लागिसकेको थियो । यो उत्तम समय थियो, र उसले अन्ततः यो गर्न गइरहेको थियो ।
टेरीले अन्नालाई आफूले बनाएको हार दिएको झन्डै दुई वर्ष भएको थियो । टेरीले अन्नाको गलामा लुकाइएको चीजलाई सार्वजनिक गर्ने योजना गर्यो, तर चीजहरू योजनामा ​​थिएनन् किनभने अन्नाले अझै कहिल्यै थाहा पाएकी थिइनन् । उनीहरु स्कटल्याण्ड पुगेपछि उपयुक्त स्थानको छनौट टेरीले गरे । त्यहाँ अन्नालाई लिएर गए अनिअन्नाको नेकलेस फुटाई दिए । यस्तो गर्दा अन्नारिसाइन् । किनभने टेरीले आफैंले उपहार दिएको हार तो डे का थिए । यद्यपि एक पटक उनीले दुई भागहरू छुट्याईन् र आफ्नो हार भित्र के लुकेको छ देखिन् । उनी पूर्ण रूपमा चुपचाप थिइन् ।
अन्नाले आफ्नै घाँ टीमा दुई बर्ष देखि लुकेको कुरा देखी र उनी हेरिरहेकी थिइन् । त्यहाँ एउटा इंगेजमेन्टको थियो । अनि उनका प्रेमी घुँ डा टेकेर उभिएका थिए । अन्ना विश्वास गर्न सकिरहेकी थिइनन् कि के भइरहेको थियो र उनी के गर्न सक्छिन् । त्यसपछि अन्ना खुशीले चिच्याइन् । अन्नाले यति धेरै वर्षसम्म नजानी पनि बिहेको औठी लगाएकी थिइन् । उनको प्रतिक्रिया पर्याप्त उत्तर थियो । त्यसैले उनी खुशीसाथ र तुरुन्तै हो भनिरहेकी थिइन् । ती दम्पती त्यो क्षणमा जति खुशी हुन सायद कहिल्यै सक्दैनन् ।
Previous: बज्न थाल्यो खतराको घन्टी ! आज पनि काठमाडौंमा डर लाग्ने गरी बढे संक्रमित
Next: सेनाका जवानसँग प्रेम भएपछि पतिलाई दिईन् डिभोर्स, छोरी जन्मेपछि सेनाका जवानले भने ‘तलाई म चिन्दिन’?
यी चार प्रदेशमा आज दिउँसो पनि, राति पनि ठूलो वर्षाको सम्भावना
आफ्नै २ भतीजहरुले मनकलालाइ….
श्रीमान-श्रीमतिको एउटै चितामा दा’हसंस्कार
उपत्यकामा लागू निषेधाज्ञा आज सकिँदै, अब निषेधाज्ञा थप हुन्छ कि हुँदैन?
दिल्लीका सुरक्षाकर्मी ह्वारह्वार्ती किन काठमाडौंमा ?
नेपालमै हुने भयो हास्य कलाकार ‘चम्सुरी’को मिर्गाैला प्रत्यारोपण , कसले दिदैछ चम्सुरीलाई मिर्गाैला?
पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस।
के हो भाकल ? के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ ?
प्रीयंका कार्कीको बच्चाको पुन्यले गरे भबिष्यबाणी, हामी त झाडीमा जन्मेको प्रीयंकाले कहाँ जन्माउने हो भन्दै हसाउनु हसाए- हेरौ भिडियो